JENESIS 1 – iboigb.bibleinfo.info
1 Na mbu Chineke kere elu-igwe na uwa.
2 Uwa we buru ihe tọb͕ọrọ n’efu na ihe tọb͕ọrọ nkití; ọchichiri di kwa n’elu ob͕u-miri: Mọ Chineke nērughari kwa n’elu miri.
3 Chineke we si, Ka ihè di: ìhè we di.
4 Chineke we hu ìhè ahu, na ọ di nma: Chineke we kpa ókè n’etiti ìhè ahu na ọchichiri ahu.
5 Chineke we kpọ ìhè ahu Ehihie, ọchichiri ahu ka Ọ kpọkwara Abali. Anyasi we di, ututu we di, buru otù ubọchi.
6 Chineke we si, Ka mbara di n’ab͕ata miri ahu, ka ọ nọ kwa nākpa ókè n’etiti miri na miri.
7 Chineke we me mbara ahu, kpa ókè n’etiti miri ahu nke di n’okpuru mbara ahu na miri ahu nke di n’elu mbara ahu: ọ we di otú a.
8 Chineke we kpọ mbara ahu Elu-igwe. Anyasi we di, ututu we di, buru ubọchi nke-abua.
9 Chineke we si, Miri ahu nke di n’okpuru elu-igwe, ka achikọta ha n’otù ebe, ka ahú kwa ala-akọrọ: ọ we di otú a.
10 Chineke we kpọ ala-akọrọ ahu Ala; nchikọta miri ahu ka Ọ kpọkwara Oké Osimiri: Chineke we hu na ọ di nma.
11 Chineke we si, Ka ala puputa ahihia ndu, ihe-ọkukú nke nāmiputa nkpuru-ọghigha, osisi mkpuru nke nāmi mkpuru di iche iche, nke mkpuru-ọghi-gha-ya di nime ya, n’elu ala: o we di otú a.
12 Ala we weputa ahihia ndu, ihe-ọkukú nke nāmiputa nkpuru-ọghigha di iche iche, ya na osisi nke nāmi mkpuru di iche iche, nke nkpuru-ọghigha-ya di nime ya: Chineke we hu na ọ di nma.
13 Anyasi we di, ututu we di, buru ubọchi nke-atọ.
14 Chineke we si, Ka ihe nke nēnye ihè di na mbara elu-igwe ikpa ókè n’etiti ehihie na abali; ka ha buru kwa ihe igosi ihe-iriba-ama di iche iche, na igu mb͕e akara àkà, na igu ubọchi na arọ:
15 ka ha buru kwa ihe nēnye ìhè nime mbara elu-igwe inye ìhè n’elu uwa: o we di otú a.
16 Chineke we kpua ihe uku abua ahu nke nēnye ìhè; Ọ kpuru ihe ahu nēnye ìhè nke ka uku ka ọ nāchi ehihie, na ihe ahu nēnye ìhè nke ka ntà ka ọ nāchi abali: Ọ kpukwara kpakpando nile,
17 Chineke we tinye ha nime mbara elu-igwe inye ìhè n’elu uwa,
18 na ichi ehihie na ichi abali, na ikpa ókè n’etiti ìhè na ọchichiri: Chineke we hu na ọ di nma.
19 Anyasi we di, ututu we di, buru ubọchi nke-anọ.
20 Chineke we si, Ka miri nuputa ihe nēnuputa enuputa, bú anu nwere nkpuru-obi di ndu, ka anu-ufe feghari kwa n’elu uwa n’iru mbara elu-igwe.
21 Chineke we kè ogologo anu uku nile di na miri, na anu nile ọ bula nwere nkpuru-obi di ndu nke nākpu akpu, nke miri nuputara, di iche iche, na anu-ufe nile ọ bula di iche iche nke nwere nku: Chineke we hu na ọ di nma.
22 Chineke we gọzie ha, si, Muanu ọmùmù, banu uba, juputa miri di n’oké osimiri nile, ka anu-ufe ba kwa uba n’uwa.
23 Anyasi we di, ututu we di, buru ubọchi nke-ise.
24 Chineke we si, Ka ala weputa anu di iche iche nwere nkpuru-obi di ndu, anu-ulo, na ihe nākpu akpu, na anu-ọhia di iche iche nke uwa: o we di otú a.
25 Chineke we me anu-ọhia di iche iche nke uwa, na anu-ulo di iche iche, na ihe nile ọ bula di iche iche nke nākpu akpu n’ala: Chineke we hu na ọ di nma.
26 Chineke we si, Ka ayi kpua madu n’onyinyo-ayi, dika oyiyi-ayi si di: ka ha nwe kwa ike n’aru azù nke oké osimiri, na n’aru anu-ufe nke elu-igwe, na n’aru anu-ulo, na n’aru uwa nile, na n’aru ihe nile ọ bula nākpu akpu nke nākpu akpu n’elu uwa.
27 Chineke we kè madu n’onyinyo-Ya, n’onyinyo Chineke ka O kere ya: nwoke na nwayi ka O kere ha.
28 Chineke we gọzie ha: Chineke we si ha, Muanu ọmùmù, banu uba, juputa uwa, buda ya n’okpuru onwe-unu; nwekwanu ike n’aru azù nke oké osimiri, na n’aru anu-ufe nke elu-igwe, na n’aru anu nile ọ bula di ndu nke nākpu akpu n’elu uwa.
29 Chineke we si, Le, enyewom unu ihe-ọkukú nile ọ bula nāmiputa nkpuru-ọghigha, nke di n’elu uwa nile, na osisi nile ọ bula, nke nkpuru osisi nāmiputa nkpuru-ọghigha di nime ya; unu ka ọ diri ibu ihe-oriri:
30 o bu kwa anu-ọhia nile ọ bula nke uwa ka M’nyeworo akwukwọ ihe-ọkukú nile ọ bula, nye kwa anu-ufe nile ọ bula nke elu-igwe, nye kwa ihe nile ọ bula nke nākpu akpu n’elu uwa, nke nkpuru-obi di ndu di nime ya, ibu ihe-oriri: ọ we di otú a.
31 Chineke we hu ihe nile ọ bula O mere, ma, le, ọ di nma nke-uku. Anyasi we di, ututu we di, buru ubọchi nke-isi.